I-PICC elahlayo ifaka ngokuzenzakalelayo i-Central Catheter Kit China Manufacturer
Incazelo:I-PICC engekho ephikisayo,I-PICC Kit elahlekile,Ukufaka ngokuzenzakalelayo i-Catheter Central
Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. I-PICC engekho ephikisayo,I-PICC Kit elahlekile,Ukufaka ngokuzenzakalelayo i-Catheter Central
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Tube yezokwelapha > Anesthesia Breathing > I-PICC elahlayo ifaka ngokuzenzakalelayo i-Central Catheter Kit
I-CE Yokukhubazeka I-Central Venous Catheter (I-CVC Kit)
I-Catheter Central Betous Anti-effection (CVC Kit)
I-CE ISO ilahla i-IBP Blood Pressure Transducer
4-6F Izinkinobho zokwelapha ze-Medical Hydrophilic Intro
J Tip Iseluleko Esiqondile Iphutha le-PTFE Yombhalo Wombhalo Ophekiwe
Ikhwalithi ye-HSG ye-Abicable Health Disposable Disposable
I-SEBS I-Resuscitator Bag Adult
I-Model No.: JT-AB0009
I-PICC Engahlanjululwayo I-PICC Efaka Ngaphandle I-Catheter Kit Enkulu
Igama lomkhiqizo : Ukufaka i- Catheter Central (Peripherally Central Catheter) (PICC)
Inombolo No .: JT-AB0009
- I-catheter eyenziwe ngamakhemikhali asezingeni eliphezulu ezokwelapha, isetshenziselwa ukukhishwa kwezidakamizwa isikhathi eside, isampula kusuka emthonjeni we-peripheral kanye nokwenza ukuhlolwa kwegazi ku-veipheral vein;
- Indlela emithathu yokwenza i-puncturing esimweni esijwayelekile, isimo se-MST noma se-ultrasonic. Okokuqala khetha i-cephalic vein ot basilica vein ukuze ufake i-PICC catheter ibe yindawo enamandla, bese ususa i-catheter zonke izinsuku ezingu-7. I-Heparin cap ayidingi ukufaka uphawu emgqeni. I-peelable i-needle ne-statlock fixation device ihlinzekwa ngaphakathi kwikithi ukuze kube lula ukusebenzisa imitholampilo.
- Ngendlela emithathu, ingcindezi embi yokusetshenziswa kwesampuli yegazi kanye nokucindezelwa okuhle kokumnika. Umzimba womugqa ohlaza okwesibhakabhaka onama-esikali kuwo ungabonisa ukujula kwawo futhi umugqa obala ungasetshenziswa ukukhombisa ukubuya kwegazi kokubona odokotela. Lo mgwaqo unobungozi obuhle obungasiza endleleni enokuthula yezinyanga ezingu-12.
- Isimiso seendlela ezintathu: ukuphela komugqa kuvaliwe, eduze kwepulagi nxazonke i-valve. Uma kungekho ukumiswa, i-valve ivaliwe ukuyeka ukugeleza kwegazi emuva emgqeni. Uma kunesidingo sokungeniswa, ngenye ingcindezi enikeziwe, i-valve izovuleka ngaphandle ukuze kukhishwe. Ngaphansi kwesimiso sokucindezela okubi, i-valve izokhenywa futhi ivuleke ngaphakathi ukuze idwebe i-sampling yegazi.
I-Catheter Central ifaka ngokuzenzakalelayo (1)
I-Needle Peelable (1)
Isingeniso ngesinalutho (1)
I-Heparin Cap (1)
I-Catheter Clamp (1)
Izigaba zomkhiqizo : I-Tube yezokwelapha > Anesthesia Breathing
Related Products List I-PICC engekho ephikisayo , I-PICC Kit elahlekile , Ukufaka ngokuzenzakalelayo i-Catheter Central , I-PVC Oxygen Mask elahlayo , I-Syringe eqhubekayo , I-Microscope yezinto eziphilayo , I-Pipette encane yesikhungo esisodwa , I-Colposcope yevidiyo ephathekayo